झुटा शिक्षा तथा शिक्षकको सुरु र अन्त्य - Nepali Christians Site
झुटा शिक्षा तथा शिक्षकको सुरु र अन्त्य
Posted by surendra Raut on October 3, 2013 at 10:30pm
हामी ईशाइ दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी धेरैलाइ झूटो शिक्षा सम्बन्धी धेर–थोर ज्ञान भए पनि आज प्रत्येक विश्वासी जवानहरु र अन्य साधारण विश्वासीले यसको यर्थाथलार्इृ जान्नू आवश्यक छ, किनकी आज संसारिक क्षेत्रमा मात्र होइन तर ईशाइ क्षेत्रमा झूटो शिक्षा तथा शिक्षकले प्रत्येक विश्वासीको घर दैलोमा पुगी – पुगी आफूले बनाएको सिद्घान्तमा बाइबलिय बचनलाई ढाली प्रचार गर्न दिनानूदिन हिडिरहेका छन् । आज प्रत्येक बिश्वासीले यसको सामना गर्न, यसको बारेमा धेरै – थोरै ज्ञान राख्नू आवश्यक छ । आज झूटो शिक्षाको सूरुवात र अन्त्यको छोटो ब्याख्या गर्न गइरहेको छु ।
यस भन्दा पहिले झूटो शिक्षा तथा शिक्षक के हो ? भन्ने बारे जानौ है त ! झूटा शिक्षक तथा शिक्षाः
सामान्य भाषमा झूटा शिक्षा भन्नाले कुनै पनि कुरालाई गलत तरिकाले प्रचार गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ । तर बाइबल अनुसार झूटा शिक्षा तथा शिक्षक के हो त ? हुन तँ बाइबलले यस्ता झूटाहरुको बारेमा धेरै पटक भनिरहेको छ ।
बाइबल अनुसार झूटो शिक्षा तथा शिक्षक के हो तँ ?
प.यूहन्ना २:२२ अनुसारः “झुटो त्यो हो जसले येशु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ईन्कार गर्दछ । पिता र पुत्रलाई जसले ईन्मार गर्छ , ख्रीष्ट विरोधी त्यही हो ।”
यसरी यदि कसैले येशु ख्रीष्टको ब्यक्तित्व र ईश्वरत्वलाई ईन्कार गर्ने झूटो शिक्षा हो, भने त्यस्ता शिक्षा प्रचार गर्ने चाहि झूटा शिक्षक हुन् । येशु ख्रीष्टले र उहाको चेलाहरुले बाइबलको धेरै खण्डमा यस्ता झूटा शिक्षा तथा ख्रीष्ट विरोधीको बारेमा भन्नूभएको छ । बाइबलमा भनिएको प्रत्यक कुरा विस्तारै – विस्तारै पूरा हुदै छन् । ख्रीष्टले मत्तिको २४ अध्यायमा ख्रीष्ट विरोधीको बारेमा भन्नूभएको छ । होशियार रहनुहोस् कतै तपाई पनि झूटा शिक्षाको पछि तँ लाग्नु भएको छैन ? आफैलाई जाच्नूहोस् ।
अब सूरु गरौ झूटो शिक्षा कहाबाट सुरुवात भयो तँ । तपाइले कहिले सोच्नुभएको छ ।आउनुहोस् यसको सुरुवात कहाँबाट भयो हेरौ ।
यस्ता किसिमका बहकाउदा,विरोधी कुराहरु सृष्टिको सुरुदेखि नै थियो । यो अहिले देखि सुरु भएको चाहि होईन । यसको अस्तित्व सुरुदेखि नै थियो । परमेश्वले आदमलाइ उसको आज्ञाकारीता हेनैको लागी “बगैचाको सबै फल खाँ तर असल र खराबको ज्ञान दिने फल चाहि नखानू, खाएमा तँ निच्चय नै मर्नेछस् भन्नूभएको थियो ।” (उत्पती २:१६,१७) तर जब सर्पले हब्बालाइ परिक्षा गर्यो त्यहा त्यसले झुटा शिक्षाको सुरुवात गर्यो । सर्पले हब्बालाई भन्यो तिमीहरु मर्दैनौ तर उक्त फल खाएमा तिमहिरु परमेश्वर जस्तै हुनेछौँ ।
यसरी शैतानले सुरुदेखी नै परमेश्वरको सत्य बाणी तथा बचनमो विरोध गर्दै, आइरहेको छ । त्यस समय शैतानले परमेश्वको विरुद्घमा बोल्न सर्पलाई प्रयोग गरेको थियो भने आज मानिसलाई प्रयोग गरिरहेको छ । यसरी झूटो शिक्षाको सुरुवात सृष्टि देखी नै भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण हामीले बाइबलबाट पाइसकेका छौँ । आजकल यहि झूटो शिक्षा परमेश्वरको वचनको विरोध गर्न ब्यापक रुपमा क्रियाशील भईरहेको छ । सृष्टिको सुरुवातमा पनि शैतानले परमेश्वरको वचनलाई असत्य सावित गर्न खोज्यो र आदम र हब्बालाई पापमा फसायो । त्यही काम आज शैतानले फेरी गर्न लागेको छ । यसका लागी त्यसले आफ्नो फौज तयार पारेर अप्रत्यक्ष रुपमा हामी बिच विभिन्न नाम प्रगोग गरी पठाइसकेको छ । अब प्रश्न उठ्छ प्रत्येक बाइबल अनुसार हिड्ने विश्वासीलाई
के हामी फेरी त्यसको बहकाउमा फस्ने तँ ?
के फेरी शैतानलाई नै विजय हुन दिने तँ ?
के त्यही गल्ती फेरी हामी दोर्याउने तँ ?
यदि होईन भने प्रत्येक विश्वासीले बाइबल पढेर, वचनलाई आफ्नो हतियार बनाउने बेला आएको छ । नत्रता याद राख्नूहोस् शैतानले जहिले पनि तपाइलाई आफ्नो बशमा पार्न सक्छ । आज धेरै जानेबुझेका अगुवाजन यसमा फसिसकेका छन् ।
कतै तपाई पनि फस्नू तँ भएको छैन ?यसको गतिविधीः
झूटको पिता भनेर शैतानलाई चिन्छोँ । आज त्यही शैतानले तपाई हाम्रै पण्डलीका विश्वासीलाइृ प्रयोग गरेर आफ्नो जाल सारा संसारमा फैलाउदै छ । यसले पहिले सियो बनेर छिर्ने काम गर्छ र पछि आफ्नो विराट झूटको नकाप देखाउने मानिसलाई फकाउदै, बहकाउदै काम गर्न थाल्दछ । यसले सबै ठाउँमा तथा सारा संसारमा आफ्नो पासो फिजाएको छ र लाखौँ भन्दा पनि बढी, यसका पछि लागेका छन् । यस्ता झूटाशिक्षाहरु विभिन्न नाम धारण गरेर नेपालमा पनि छिरेका छन । जसमध्ये केहीको नाम यसप्रकार छन् ।
जेहोवाज विट्नेस (Charles Taze Russell, organized 1880)
सेभेन्थ डे एडभेन्टिष्ट (william Miller/ Allen white)
मोर्मोन (Joseph Smith organized April 6, 1830)
रोमन क्याथोलिक (Emperor Constantine, organized in early 300's A.D. )
ख्रीष्टको मण्डली (चर्च अफ क्राईष्ट )
ख्रीष्टियन साइन्स (Mrs Mary Baker Eddy, organized 1879 ) वन्ली जीजस
मानमिन चर्च ( Jae Rock Lee)
सु – समाचार बप्तिस्मा सम्प्रदाय ( खन सीन छान ÷ पार्म ओक सु )
कोरिया येशु बप्तिस्मा सम्प्रदाय ( ई यो हान ÷ पार्क ओक सु )
परमेश्वरको मण्डली ( आन साङ होङ ) इ मा ही ( नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी ) ख्रीष्टियन सु – समाचार सभा ( छङ म्योङ सक)
WCC / NCC ( World Church Council / National Churches Council )
बाईबलबारे झूटो शिक्षा
हर्बट डबल्यू आर्मस्ट्रङको मण्डली
मुक्तिबारे झूटो शिक्षा
The Children of God (C.O.G.)/The Family (Moses David Berg, organized 1968)
यसरी यस्ता प्रकारका अरु धेरै झूटा शिक्षाका नामहरु छन । यिनीहरुको आफ्नै सिद्घान्त अर्थात कपोकल्पित सिद्घान्त छन् जसलाई यिनीहरु मध्ये धेरैले परमेश्वरको प्रकाश भनेर भन्दछन् । के आज हामी विश्वासीहरु यस्ता झूटा शिक्षा तथा शिक्षक संग लड्न सक्छौँ या सक्दैनौँ ? आफैले विचार गर्नुहोस । यसबाट बच्ने एक मात्र उपाय भनेको प्रार्थनाद्घारा बाइबलीय वचनको राम्रो अध्ययन हो । यिनिहरुको मुख्य उदेश्य भनेको परमेश्वरको वचनको गलत अर्थ लगााई आफै परमेश्वर, उनिहरुको मण्डलीमा मात्र मुक्ति पाइन्छ, उद्घार पाईन्छ, भन्ने जस्ता कुरा हुन् ।
आज संसारमा जे जति पनि कुराहरु भइरहेका छन् ति कुराहर बाइबलमा लुकेको छेन । बाइबलले भूतकाल देखि वर्तमान र भविष्यत सम्मको सबै कुरा प्रष्ट पारेको छ । बाइबल सत्यताको त्यो महासागर हो जहा यस्ता झुटा शिक्षाहरु आउछन, विरोध गदृछन् भन्ने कुरा अघिबाटे भनिसकेको छ । २ पत्रुस २:१”तिमीहरुको माझमा झुटा शिक्षाहरु खडा हुनेछ । यिनिहरु विनाशकारी रुपले झूटा शिक्षाहरु ल्याउने छन् । तिनिहरुले उद्घार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि ईन्कार गर्नेछन । “त्यसै गरि १ यूहन्ना २:१८–१९,”बालकहरु हो आखिरी घडी यही हो । ख्रीष्ट विरोधी आईरहेका छन भन्ने सुनेका छोँ । अब धेरे ख्रष्टि विरोधी आएका छन् ।
यसरी बाइबलले झूटा शिक्षा तथा शिक्षकको समेत पर्दा फास गरिसकेको छ । यिनिहरुको शिक्षामा अलिकति पनि सत्यता पाईदैन । यिनिहरुको शिक्षा तँ केवल मनगडन्ते हुन्छ ।
बाइबलले यिनिहरुको सिद्घान्तलाई के भन्दछ हेरौँ ।
कलस्सी २:८ अनुसार
"ध्यान देओ कि कसेले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्घारा तिमीहरुलाई शिकार नबनाओस, जो ख्रीष्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभुत सिद्घान्तहरु माथि अडिएका छन् । "
त्यसै गरि प Þतिमोथी १:४ अनुसारः"तिनीहरु अनुमानका कुराहरु मात्र बढाउने दन्त्यकथाहरु र नटुङ्गिने बंशावलीहरु तिर नलागुनन"मथिका दुइवटा पदहरु हेर्दा, यिनिहरुको सिकाउने तरिका ख्रोक्रो कपोकल्पित, भ्रमात्मम र अनुमान लगाएका कुराहरु मात्र हुन भन्ने बुझिन्छ । यसका पछि लाग्नेको भविब्य न त पृथ्वीमा रहन्छ न तँ स्वर्गमा नै रहन्छ । यिनीहरु दोस्रो मृत्यूको भागीदारमा समावेश गरिने आत्माहस् हुन् ।
कतै तपाइहरु प्नि यसकै भागिदार त हुन भएको छेन, आफैलाइ जाच्नुहोस् ।झूटा शिक्षाको पछि लाग्नेहरुको अन्त्यः
हामीले सरसर्ती हेर्यौँ कि बाइबलले झुटा शिक्षाको बारेमा दिएको चेतना र साथै यसका पछि नलाग्ने चेतावनी पनि दिएको पायौँ । यति मात्र होईन यस्ता झूटाहरुको पछि लाग्नेहरुको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट सँग बताउदछ ।“ २ पत्रुस २:१२ अनुसारः"तर यी मानिसहरु नबुझेका कुराहरुको निन्दा गर्छन । यिनीहर बिवेकहीन जनावरजस्ता छन् र स्वभाविक ईच्छाहरुका वशमा रहन्छन् । उनिहरु पक्रेर मारिनलाई जन्मेका जस्तै छन् र यिनीहर पशुहरु जस्ते नष्ट हुनेछन् ।
त्यसैगरी २ पत्रुस कै २:१७
"तिनीहरु पानी नभएका मुहानहरु हुन् आधीले उडाएका तुवाँला हुन । तिनहिरुका निम्ति पातालको अन्धकार साचिएको छ ।"यस्ता झूटको पछि लाग्नेहरुको अन्त्य साच्चैनै भयानक हुन्छ र यिनीहरुको राज्य पातालको अन्धकार साचिएको छ । यसरी यसको अन्त्य के हो र यसका पछि लाग्नेहरुको नाश कसरी हुन्छ भनेर प्रष्ट सँग भनिसकेको छ । त्यसैले सबै बिश्वासीजनहर होसियार भएर बस्नुहोस् । यिनीहरु तपाई कतिपयका घरहरुमा आइसकेका छन् र फेरि पनि आउनेछन् । यिनिहरु सँग लड्न बाइबललाई आफ्नो हतियार बनउनचाहि नर्बिसिनुहोस् ।
बिश्वासी दाजुभाई, बाबा आमा, पास्टर तथा ख्रीष्टका प्रिय अगुवाजनहरु बाइबलले भन्दछ " अर्को कुनै सु–समाचार छैन बाइबल बाहेकका सु–समाचार स्वर्गबाट आउने दुतले नै प्रचार गरेता पजि त्यो श्रापित होस् । यदि बाइबल बिपरित कसेले अर्को सु–समाचार प्रचार गर्छ भने त्यो ब्यक्ति श्रापित होस् । (गलाती १:६–९)
यदि बाइबलको वचन तथा सिद्घान्त भन्दा फरक सिद्घान्त लिएर तपाईको घर दैलोमा आउछन भने तिनीहरुको अभिवादन नर्गनुहोस । उनीहरुको कुरै नसुन्नुहोस् किनकी बाइबलले प्रष्टसँग भनेको छ ।
"ख्रीष्टको सिद्घान्तमा स्थिर नबस्ने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्न ………………। यदि कोही तिमीकहा आएर यो सिद्घान्त ल्याएन भने त्यसलाई स्वागत नगर्नु । त्यसलाई अभिवादन पनि नगर्नु ।" २ यूहन्ना १:९–१०
Kathmandu Hepziba Church, Imadol, Lalitpur
Vice-President of NCUYF Nepal
E-mail:sushanti_love@yahoo.com Views: 160
Tags: article, church, falsechurch, sermons Like3members like this
Comment by Kashi Gurung on October 5, 2013 at 10:32pm jaymasih daju tapailai dairai darai danyavad chha mitho vachan sunayi satarka garayi dinu bako ma parmeshwar pita ko ashish sadai tapai sang bayeko hosh .
Comment by Anit pun on October 4, 2013 at 2:46pm जय मसीह।धन्यवाद जानकारीको लागी। Comment by Shrawan Bomjan on October 4, 2013 at 8:12am हजुरलाई धन्यवाद, झुटो शिक्षा र त्यसका सुरुवात, अन्त्यका कुराहरुलाई सार्है मेहनत गरेर प्रष्ट्याई दिनुभएको लागि ! RSS